शरीरका यी ६ ठाउँको रौँ कहिल्यै पनि नहाटाउनुस् ! - TheSidhaKura
तर, आँखाको रौंले पनि आँखाको रक्षा गर्छ । प्रदुषणबाट बचाउँछ र आँखामा हुने समस्या कम गर्छ । सके सम्म आँखाका रौं नकाटेको स्वास्थ्यको दृष्टिले रा्रो मानिएको छ ।
तर छातीमा रौं नहुनु अस्वस्थ हुनुको लक्षण भने होइन । पुरुषको छातीमा हुने रौं नकाट्नु राम्रो मानिन्छ । कतिपय अवस्थामा छातीका रौं काट्दा अस्वस्थ हुने ख तरा समेत हुन्छ ।
← बडादशैँको आठौं दिन आज महाअष्टमी, देशभर दुर्गाभवानीको विशेष पूजाराधना गरिदै डा. भट्टराई दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण →